Somali Land oo Heshiis la gashay Maamulka Khaatumo ee uu hogaamiyo Cali Khaliif Galayr. – Hornafrik Media Network
Somali Land oo Heshiis la gashay Maamulka Khaatumo ee uu hogaamiyo Cali Khaliif Galayr.
By HornAfrik	 On Jun 17, 2017
Maamulada Somaliland iyo Khaatumo ayaa goor dhow magaalada Hargeysa ku kala saxiixday heshiis ka kooban shan qodob, iyadoo heshiiskan uu u gogol xaarayo midnimada labada maamul oo horay xurguf siyaasadeed u dhaxeeyay.
Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiiday Guddoomiyaha Guddiga wada hadalka Khaatumo ee Somaliland ahna wasiirka Arrimaha Dibadda Sacad Cali Shire, halka dhanka Khaatumo uu u saxiixay Maxamuud Sheekh Cumar Xasan
Qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ah in la wada qorsheeyo, lagana wada shaqeeyo, sidii loo heli lahaa Somaliland oo loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad, maamul wanaag iyo xaq dhowrista xuquuqul isnaanka ku dhisan diinta Islaamka.
Labada dhinac ayaa 10 bisha July ee soo socota isugu imaan doono wada hadalo ka dhici doona magaalada Burco, si loo dhameystiro wixii qabyo ah, lagana tashdo sidi loo qaban lahaa shirweyne guud oo loo dhan yahay.
Halkan hoose ka akhriso Heshiiska Somaliland iyo Khaatumo:-
Somalia oo Waqti u qabatay in Dalka uu uga baxo Madaxa FAO ee Somalia.
Wafdi UK ka socday oo maanta booqday Muqdisho, diidayna inay dhaafaan Garoonka Diyaaradaha.